Kitra – Lalao firahalahiana: tsy ho avy i Metanire, baraingo ny amin’i Amada sy i Paulin - ewa.mg
News - Kitra – Lalao firahalahiana: tsy ho avy i Metanire, baraingo ny amin’i Amada sy i Paulin
Miandry ny valin-tenin’ny
federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) izany sisa dia ho
fantatra izay hanaovan’ny Barea de Madagascar, lalao firahalahiana
eo amin’ny fanomanana ny fihaonana hikatrohana amin’ny Elefantan’i
Côte d’Ivoire. Efa nanaiky i Nicolas Dupuis fa ny Etalons n’i
Borkina Faso no hanaovana izany. Andrasana ihany koa ny daty
hanatontosana ny lalao, izay eo anelanelan’ny 9 ka hatramin’ny 14
oktobra, ho avy izao. Tsy tokony hisy intsony ny olana satria efa
nifampiresaka tamin’io firenena io ry zareo tompon’andraikitry ny
federasiona. Hotanterahina any Lisbonne, Portugal izany lalao
izany. Ankoatra izay, fantatra fa tsy ho anisan’ireo mpilalao
hiatrika izany i Romain Metanire, vodialaharana havanana. Noho ny
tsy fisian’ny sidina miala ao Etazonia mankany Eoropa, ny
anton’izany. Mbola baraingo kosa ny amin’i Voavy Paulin sy i
Ibrahim Amada, izay tena ao anatin’ny fifaninanam-pireneny mihitsy,
ankehitriny. Paulin miatrika izany any Egypta ary i Amada any
Quatar. Mety tsy hisy ihany koa mpilalao avy eto an-toerana na
maniry ny hiantso azy ireo aza i Nicolas Dupuis, noho ny antony
ara-bola. Manam-pikasana ny hampivondrona ireo mpilalao rehetra ao
Frantsa, roa herinandro mialoha ny lalao i Nicolas Dupuis, mba
hisian’ny fiarahana matotra eo amin’ny mpilalao.
Ankehitriny, manao antso avo ny FMF
hifanome tanana sy hifanampy hoentina miatrika io lalao io, izay
zava-dehibe tokoa satria tsy mbola tomombana ny ara-bola.
L’article Kitra – Lalao firahalahiana: tsy ho avy i Metanire, baraingo ny amin’i Amada sy i Paulin a été récupéré chez Newsmada.
MDN: nanatrika ny hetsika iraisam-pirenen’ny fiaramanidina
Notontosaina ny 17 ka hatramin’ny 23 jona 2019 ho avy izao ny fampirantiana iraisam-pirenen’ny fiaramanidina sy ny faritra anabakabaka izay andiany faha-53 izao hetsika iraisim-pirenen’ny fiaramanidina sy ny tontolony fanao any Bourget Paris na “Salon du Bourget 2019”. Tonga nitsidika sy nizaha izany ny tompon’andraikitra voalohany amin’ny sehatra fiarovana ny habakabak’i Madagasikara, ny Jly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN) izay nisolo tena ny filoham-pirenena, ny talata teo. Fotoana ihany koa hamondronana ireo orinasa mpisehatra anabakabaka maneran-tany hatramin’izay nisian’ny fanavaozana ara-teknolojia farany. Hatramin’ny nanombohan’ny fampirantiana iraisam-pirenen’ny fiaramanidina sy ny faritra anabakabaka izay natao tao amin’ny « grand palais tao Paris » dia ny taona 1950 ny fampisehoana ny sidina voalohany tao Orly sy Bourget ary nanomboka teo dia nipaka tonga tamin’ny sehatra maneran-tany ny hetsika. Nandritra ny fitsidihan’ny minisitra ity hetsika ity no nanararaotany nijerena ireo fitaovana mety ilaina sy afaka hanampy amin’ny fampandriana fahalemana izay vina napetraky ny filoham-pirenena ho fampitaovana ny Tafika Malagasy.Jean ClaudeL’article MDN: nanatrika ny hetsika iraisam-pirenen’ny fiaramanidina a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasan’ny Men sy ny Unucef: nojerena ny olana fototra momba ny akany fibeazana
Raha ny salanisa, 30,26%-n’ny ankizy malagasy ihany no tafiditra an-tsekoly. Misitraka ny sekolim-panjakana (EPP) ny 60%-n’ireo ankizy ireo. Maro ny antony mahatonga ny sakana tsy hahafahan’ny ankizy mihazo ny sekoly. Voalohany amin’izany ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny. Eo indrindra koa ny fahalaviran’ny sekoly miala amin’ny trano fonenana.Mbola vesatra ho an’ny ray aman-dreny ihany koa ny fanohanana ireo mpampianatra Fram tsy hanefana vola, ny fitaovana ho an’ny mpianatra… Ny alarobia teo, nisy ny atrikasa fizahana ifotony ny olana sedraina momba ny akany fibeazana, izay niarahana amin’ireo mpisehatra amin’ny fanabeazana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana.Tohin’ny efa notanterahina tany Antsirabe tamin’ny volana febroary teo ity natao ity. Nisy ny fifanakalozan-kevitra tamin’ny alalan’ny “visio-conférence” niarahana tamin’ny tenkisianin’ny Unicef. Nilaza ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (Men) fa hamolavola paikady ho fampiroboroboana ny akany fibeazana ao anatin’ny fampiharana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE). Nahazoana tohana ara-teknika avy amin’ny tetikasa eo anivon’ny biraom-paritry ny Unicef aty Afrika Atsinanana sy Afrika Australe izany.Tatiana AL’article Fiaraha-miasan’ny Men sy ny Unucef: nojerena ny olana fototra momba ny akany fibeazana a été récupéré chez Newsmada.
Miantso vonjy mafy: sahirana tanteraka ny mpanao hiragasy
“Nambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny alahady teo fa efa afaka misokatra ny hiragasy. Tsy azo atao anefa ny mamory olona mihoatra ny zato”, hoy i Ramilson (Dadafara) filoha lefitry ny Federasion’ny mpihiragasy, omaly. “Anteriko hatrany fa any ambanivohitra no tena hiasanay. 40 olona ny mpikambana ao anatin’ny tarika mpanao hiragasy iray. Izany hoe, 80 olona eo ho eo raha tarika mpihiragasy roa no mifanandrina. Mpijery 20 ange izany dia tratra io isa 100 io e! Amin’ny fomba ahoana no hamerana ny mpitia hiragasy ho 20 amina adin-kiragasy iray?”, hoy hatrany izy nanazava ny fomba fiasan’ny mpanao hiragasy. Nohamafisiny fa “sahirana tanteraka ny mpanao hiragasy. Tarika mpanao hiragasy iray anefa mamelona olona 200 mahery. Ny asa tsy afa-mandeha. Sahirana tanteraka izahay ka miangavy ny Filoham-pirenena sy ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga, vonjeo ny mpanao hiragasy. Ampio izahay fa tena tafahitsoka lalina ao anatin’ny tsy fahampiana. Ilay hoenti-miatrika ny fiainana andavanandro mihitsy no efa tsisy intsony”.Nomarihn’i Dadafara Ramilson hatrany fa “raha misy zavakanto sy kolontsaina mitahiry sy mahatahiry ireo soatoavina malagasy, voalohany ny hiragasy. Mitaiza sy manabe ny Malagasy ho tia ny kolontsainy izahay. Izany hoe, rehefa mijanona sy tsy afa-manao na inona na inona tahaka izao ny mpihiragasy, midika izany fa mihena ny isan’ny mpanabe”. Notsiahiviny, omaly, ihany koa fa tafalatsaka tanteraka amin’ny fotoam-piasan’ny mpihiragasy (maintany) ny fisian’ny valanaretina covid-19. “Vao mainka hitofezaka tanteraka ny mpanao hiragasy raha vao tafiditra ao anatin’ny fotoam-pahavaratra isika satria tsy misy, na iray aza, adin-kiragasy afaka atao ao anatin’io vanim-potoana io. Noho izany, mitaraina sy mangata-bonjy aminao izahay, Andriamatoa Filoham-pirenena, ampio izahay fa mijaly tanteraka”, hoy hatrany ny filoha lefitry ny Federasion’ny mpikabary eto Madagasikara.HaRy Razafindrakoto L’article Miantso vonjy mafy: sahirana tanteraka ny mpanao hiragasy a été récupéré chez Newsmada.
Tovolahy mamon-drongony: olona fito maty nofirainy antsy, matin’ny olona koa izy avy eo
Tsy namelan’ny olona raha tsy matin’izy ireo ny tovolahy iray, voalaza fa mamon-drongony, ka nahafaty olona fito sy nandratra olona 12 hafa tao amin’ny fokontany Mandritsara, kaominina ambanivohitr’i Matanga, distrikan’i Vaingandrano, ny alakamisy lasa teo. Olona sendra nifanena taminy teny an-dalana ireto niharan-doza tampoka ireto. Araka ny fanazavan’ny ben’ny Tanànan’i Matanga, i Bekamisy, manao fihetsika mahery setra toy izao isaky ny mifoka rongony ity tovolahy ity. Firainy antsy avokoa izay olona mifanena aminy. Marobe ireo olona efa naratra avy nofirain’ity tovolahy mamon-drongony ity. Samy tsy nisy nanampo na inona na inona rahateo olona. Voalaza fa tsy miteny rahateo izy fa izay sendra azy, tratran’ny fira antsy avy hatrany. Niteraka hatezerana teo amin’ny fokonolona any an-toerana izany ka niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany ity tovolahy nahavanon-doza ity. Vokany, maty tsy tra-drano ilay tovolahy mamon-drongony. Nampidirina hopitaly kosa ireo naratra ary efa lasan’ny fianakaviany ny fatin’ireo niharam-boina. Nidina tany an-toerana avy hatrany ny borigadin’ny zandary ao Vaingandrano ary efa milamina ity raharaha vonoan’olona sy fandratrana olona tao Matanga ity. J.C L’article Tovolahy mamon-drongony: olona fito maty nofirainy antsy, matin’ny olona koa izy avy eo a été récupéré chez Newsmada.
Fivadiam-pitokisana :: Lehilahy, 55 taona, nangalatra môtô
Voasambotra teny Andravoahangy, afak’omaly, maraina ny lehilahy iray, 55 taona, noho ny raharaha fivadiham-pitokisana tamina fividianana môtô. Nividy môtô iray mitentina iray tapitrisa ariary tamin’olona io lehilahy io, tamin’ny volana marsa lasa teo. Tsy voaloa anefa ny vidiny saingy nentiny sy tsy naveriny intsony ny môtô. «Nifanarahana fa hatao intelo mandoa ny vidin’ny môtô. Telo hetsy ariary no efa naloan’ ilay mpividy ka nentiny ny entana. Tsy hita popoka izy taorian’izay. Tsy voaloa ny ambim-bola», araka ny nambaran’ny mpanao famotorana. Nametraka fitarainana ny mpivarotra. Nanao fanadihadiana ny polisy. Noraisim-potsiny tetsy Andravoahangy ilay voatondro ho mpangalatra. Niaiky ny fahadisoany itsy farany saingy efa namidiny tamin’olon-kafa ny môtô, araka ny fanampim-panazavana hatrany. L’article Fivadiam-pitokisana :: Lehilahy, 55 taona, nangalatra môtô est apparu en premier sur AoRaha.
François De Mahy, député de La Réunion, était acquis à la colonisation de Madagascar et encourageait ses compatriotes à s’installer sur la Grande île. Après Vohemar, la ville de Diégo-Suarez accueillait énormément de Réunionnais qui accaparaient les terres cultivables. Ces colons s’installaient dans l’Ouest de la ville comme Namakia puis Ambohimanarina, dans la partie Nord-Ouest, et constituaient une petite colonisation. Durant l’âge d’or des colons dans les années 20, les créoles bénéficiaient de beaucoup de terres et de concessions. Ils promettaient fidélité à l’administration coloniale. Les colons réunionnais avaient un rôle non négligeable dans la vie politique de Diégo-Suarez. Ils influençaient les Malgaches, sous prétexte que la France était une mère civilisatrice. On trouvait ces créoles dans la partie Sud et Sud-Ouest de la ville de Diégo, comme Joffreville et Antsalaka. Toutefois, ils n’étaient pas toujours des colons et n’étaient pas forcément tous des pro-coloniaux. Certes, ces colons réunionnais vivaient majoritairement à la campagne ou dans les zones périphériques de Diégo-Suarez, mais comme la ville était une zone portuaire et stratégique, on trouvait leurs compatriotes qui travaillaient dans l’arsenal. Les travailleurs étaient plus actifs dans la vie politique de la ville. Contrairement à leurs compatriotes de la campagne, certains d’entre eux étaient victimes d’abus de la part des autorités locales. Iss Heridiny L’article Histoire : Les Réunionnais d’Antsiranana dans les années 20 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Histoire : Les Réunionnais d’Antsiranana dans les années 20 a été récupéré chez Midi Madagasikara.